Odowaa oo runta u sheegay Jubaland & P/Land | Caasimada Online
Home Warar Odowaa oo runta u sheegay Jubaland & P/Land
Odowaa oo runta u sheegay Jubaland & P/Land
Baydhabo (Caasimada Online) – Wasiirka arimaha gudaha Xukuumada Soomaaliya C/raxmaan Xuseen Odowaa ayaa markii ugu horeysay si cad u sheegay in deegaanada laga sameeyay maamulka Bakool sare ay toos u hoos yimaadaan maamulka Koofur Galbeed.
C/raxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegay in maamulka laga dhisay magaalada Ceelbarde ay ka warqabaan dowlad ahaan, ayna ka shaqeyn doonaan sidii arimahaasi xal looga gaari lahaa.
Isaga oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayuu sheegay in maamulka koofur galbeed ay kala shaqeyn doonaan sidii loo dhameyn lahaa go’aanka ay qaateen qaar kamid ah beelaha daga gobolka Bakool.
Sidoo kale wasiir Odowaa, wuxuu tilmaamay in mar walbaa ay dhacdo in beelaha qaar aysan ku qancin maamulada loo dhiso, laakiin wax wanaagsan aysan aheyn in degmooyin maamul loo sameeyo.
Maamulka Koofur galbeed ayaa horey u shaaciyay in marnaba aysan aqbaleynin in deegaano hoostaga maamulkoosa laga dhiso maamul kale, waxayse arinta u muuqataa dagaal siyaasadeed oo u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo Koofur Galbeed.
Puntland oo isxulufeysi siyaasadeed uu kala dhaxeeyo Jubbaland ayaa taageertay dhismaha maamulka Bakool sare ee gobolka Bakool.